PTFE valopy EPDM Gasket - CIXI DONGFENG SEALING & PACKING Co., Ltd.
PTFE valopy EPDM Gasket
PTFE valopy EPDM gasket mampiasa palitao PTFE dia nanjary malaza ampiasaina amin'ny serivisy manimba tena satria ambany ny min. Ny fihenjanana eo amin'ny seza, ny fanoherana tsara ny fandoroana, ny tsy fihoaram-pefy ary ny fisafidianana fitaovana isan-karazany hamenoana mba hahitana fahombiazana tsara indrindra amin'ny fampiharana manokana. Endri-javatra vokatra: l Mazava ho azy 100% fanoherana simika l fanoherana ny hafanana: -200 ~ + 260 ℃ l fanoherana fanerena: 4Mpa Fampiharana PTFE gasket valopy PTFE be mpampiasa amin'ny sakafo sy ny fizotran'ny ...
Payment Terms: Western Union na PayPal ， T / T, L /
PTFE valopy EPDM gasket mampiasa palitao PTFE dia nanjary malaza ampiasaina amin'ny serivisy manimba tena satria ambany ny min. Ny fihenjanana eo amin'ny seza, ny fanoherana tsara ny fandoroana, ny tsy fihoaram-pefy ary ny fisafidianana fitaovana isan-karazany hamenoana mba hahitana fahombiazana tsara indrindra amin'ny fampiharana manokana.
l fanoherana simika 100%
l fanoherana ny maripana: -200 ~ + 260 ℃
l fanoherana fanerena: 4Mpa
Ny gasket valopy PTFE dia be mpampiasa amin'ny sakafo sy ny indostrian'ny fizotran'ny indostrialy izay tsy ahazoana mandoto ny mpanelanelana. Mety amin'ny alkaly matanjaka, fluida cryogenika, oxygen, gazy klôroina sns.